जीवनका गम्भीर प्रश्‍नहरू
परमेश्‍वरको स्वभाव र संसारमा के हुँदैछ भनी जान्‍न चाहनेहरूका निम्ति लेखिएको ६ वटा पाठहरू भएको पाठ्यपुस्तक । जीवन के हो भन्‍ने बारेमा के तपाईं कहिलेकहीँ अचम्ममा पर्नुभएको छ ? तपाईं किन जन्मनुभयो ? तपाईंले कसरी आनन्द प्राप्‍त गर्न सक्‍नुहुन्छ ? यदि यसो हो भने, यी ६ वटा पाठहरू तपाईंका लागि अति नै उपयोगी हुनेछन् ।
हामी अगमवक्ताहरूबाट सुन्छौं
यस पाठ्यपुस्तकका आठवटा पाठहरूले परमेश्‍वरका आठजना अगमवक्ताहरूका जीवन-परिवर्तनका अनुभवहरूलाई रेकर्ड गरेका छन् । यस पाठ्यपुस्तकको ध्यानपूर्वक अध्ययन र अगमवक्ताहरूका वचनप्रति भएको आज्ञाकारिताले परमेश्‍वरमा कसरी समर्पण गर्ने भन्‍ने बारेमा जान्‍न र परमेश्‍वरमा आफूलाई समर्पित गर्न मद्दत गर्नेछ ।